Ku Dadaalida Dhanka Cadaalada Jinsiga Arinta #1: Soo Bandhigida Cadaalada Jinsiga iyo Isirnimada
by	Jason Thorpe	/ Isniin, 27 Diseembar 2021	/ Published in Community, Featured, Hada Farxad
U dadaalida Taxanaha Cadaalada Jinsiga
TPCH ayaa la sii daayay Ku Dadaalida Cadaalada Jinsiga: Wacyigelinta Ficil ee Ururada Bulshada Ku Salaysan Degmada Pima, wadashaqeyn la leh Jaamacadda Arizona Southwest Institute for Research on Women bisha Noofambar 2021. Markaan bilaabeyno 2022, waxaan ugu baaqaynaa ururada bulshada iyo la-hawlgalayaashayada guryeynta inay sii qoto dheereeyaan go'aankeena la wadaago ee horumarinta sinnaanta jinsiyadda.
Toddobaadyada soo socda, waxaanu wadaagi doonaa taxanaha u dadaalida cadaalada jinsiyadeed kaas oo ay ku jiraan 7 ficil oo muhiim ah oo ururada bulshada ku salaysan ay qaadi karaan si ay si wanaagsan u fahmaan oo si togan u saameeyaan isbeddelka si loo yareeyo farqiga jinsiyadeed ee bulshooyinkayada, adeegyada, iyo ururada. Farriin kasta waxaa ku jiri doona macluumaadka asalka ah ee ku saabsan ficilka muhiimka ah, xeeladaha lagu taliyay, iyo agabka iyo agabka dadweynaha ee la heli karo si aad u caawiso shaqaalahaaga, tabaruceyaasha, iyo hoggaanka marka aad ku dadaalayso caddaaladda jinsiyadda.
Qodobka # 1
Hordhac Ku Saabsan Baaqayada Ficilka iyo Fikradaha Muhiimka ah
Arrintaan, waxaan bilaabaynaa inaan aasaaska u dhigno fahamka loo baahan yahay si aan uga qayb-galno 7-da Ficil ee lagu qeexay Baaqa Ficil annagoo sahameyna macnaha iyo saameynta caddaaladda jinsiyadda iyo cunsuriyadda.
Ha moogaanin arrinkayaga soo socda ee aan ku soo bandhigayno Targeted Universalism oo ah istaraatijiyad fure u ah dhimista kala-duwanaanta iyo horumarinta caddaaladda jinsiyadda ee shaqada ku salaysan bulshada. Ma sugi karaa? Riix halkan si aad u soo dejiso Wicitaan Ficil oo buuxa hadda.
Ku saabsan Wicitaan Ficil
Ku Dadaalida Cadaalada Jinsiga ma aha qalab, mana aha hage tallaabo-tallaabo ah.
Hase yeeshe, baaqan ficilka ah (CTA) wuxuu bixiyaa macluumaad toos ah oo ku saabsan lama huraanka ah in wax laga qabto caddaalad darrada jinsiyadda, iyo xeeladaha ururkaagu uu hirgelin karo si wax looga qabto sinnaan la'aanta jinsiyadda.
Ururada (ay ku jiraan macaamiishooda, xubnaha bulshada, shaqaalaha iyo hogaanka) ayaa ugu haboon inay go'aamiyaan qorshahooda ugu wanagsan, daneeyayaashana waa inay u shaqeeyaan si wada jir ah, iyo shuraako siman. Ururo badan ayaa laga yaabaa in ay durba bilaabeen shaqada cadaalada jinsiyadeed, laakiin waxa laga yaabaa in ay dareemaan in dadaalkooda uu hakad ku jiro, ama in dadaalladu ay noqdeen kuwo aan waxtar lahayn. Ficilada la soo jeediyay ee ku jira CTA-da ayaa laga yaabaa inay gacan ka geystaan ​​dib u kicinta kooxaha ama waxay bixiyaan qaab shaqadan.
Baarista iyo ururinta xogta farqiga jinsiyadeed ee ka dhex jira gudaha shaqaalaha iyo dibadda kooxaha macmiilka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah habka. Si kastaba ha ahaatee, ururadu waa in ay iska caabiyaan in ay ku milmeen xog ururinta iyo habka imtixaanada. Iyadoo tirada badan ee ururrada xogta ay inta badan ururiyaan, falanqayn kasta waxay u badan tahay inay horseedi doonto su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha xogta kuwaas oo dib u dhigi kara ficil iyo shaqo la taaban karo.
Ku dadaalida Cadaaladda Jinsiyadda waa baaq waxqabad oo loogu talagalay ururada bulshada ku salaysan ee Koonfurta Arizona. Iyadoo ururo badan ay sameeyeen go'aan ku saabsan caddaaladda jinsiyadeed, ficilku wuu gaabiyey in la raaco.
Fahamka Cadaalada Jinsiga
Horay U Tartamaya waxa uu ku tilmaamay cadaalada jinsiyada in ay tahay hab habaysan, cadaalad ah oo loola dhaqmo dadka ka soo kala jeeda jinsiyadaha kala duwan, taasoo keenta fursado iyo natiijooyin loo siman yahay oo dhan. Caddaaladda jinsiyadeed ayaa ka baxsan "cunsuri-diidka."
Ma aha oo kaliya maqnaanshaha takoorka iyo sinnaan la'aanta, laakiin sidoo kale joogitaanka nidaamyada iyo kheyraadka ula kac ah ee soo saara oo joogteynaya caddaaladda jinsiyadda iyada oo loo marayo tallaabooyin firfircoon iyo ka hortag ah.
In Ka Hawlgelinta Cadaaladda Jinsiyadda ee Hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn, Maggie Potapchuk waxa ay qeexaysaa dariiqa lagu hawlgelinayo caddaaladda jinsiyadda iyadoo dib loo sawirayo oo la wada abuurayo adduun xaq ah oo la xoreeyey. Tan waxaa ka mid ah:
1. Fahamka taariikhda midab-takoorka iyo nidaamka sarreynta cad iyo wax ka qabashada waxyeellooyinkii hore;
2. Ka shaqaynta xidhiidhka saxda ah iyo la xisaabtanka nidaamka deegaanka (arrin, waax, ama nidaamka deegaanka bulshada) ee isbedel wadareed;
3. Hirgelinta faragelinta adeegsata falanqaynta isgoysyada oo saameeya nidaamyo badan;
4 . Dhex dhexaadinta Madow iyo dhisida bulshada, dhaqanka, dhaqaalaha, iyo awooda siyaasadeed ee dadka madow, asaliga ah, iyo dadka kale ee midabka (BIPOC); iyo
5. Ku-dhaqanka jacaylka oo ay weheliso khalkhal iyo iska caabin ku wajahan xaaladda taagan.
Horay U Tartamaya tilmaamayaa afar heer oo midab-takoor ah; Qaabkani waxa uu fidinayaa fikradda ah in cunsuriyaddu ay ku kooban tahay falalka nacaybka ama takoorka, ee ku salaysan jinsiyadda, oo uu qof qof kale ku fuliyo. Hay'adda cunsuriyadda iyo saamaynta taariikheed ee cunsuriyaddu waxay ku sii jirtaa bulshada oo dhan, laga bilaabo heer shakhsi ilaa heer nidaam:
Cunsuriyada gudeed Waxa loola jeedaa eexda shakhsi ahaaneed iyo fikradaha ku saabsan jinsiyadda ee ay keentay u-noolaanshahayaga bini'aadamka si loo sameeyo koox-koox iyo kooxo ka baxsan, iyo saamaynta shakhsi ahaaneed ee fariimaha isir nacaybka gudaha ee ku saabsan kooxahayada bulshada. Marka fariimahan lagu daro dabeecadeena dabiiciga ah ee raacitaanka qoraallada garashada, waxaan la kulmaa ismaandhaaf u dhexeeya qiyamkeena miyirka ah iyo eexda miyir la'aanta ah.
Cunsuriyada dadka dhexdooda Waxa loola jeedaa farriimaha dhaqameed ee gudeed ee lagu wadaago isdhexgalka shakhsi ahaaneed. Farriimahan waxa lagu joogteeyaa hab-dhaqanno la wadaago oo inta badan ay ku jiraan shakhsiyaad iyo kooxo qaar, kuwa kalena laga saaro.
Cunsuriyada hay'adaha Waxa loola jeedaa hay'adaha iyo ururada qaata iyo/ama ilaalinta siyaasadaha iyo habraacyada keena natiijooyin aan loo simanayn oo loogu talagalay dadka midabka leh. Cunsurinimada hay'aduhu waxay ka dhici kartaa dugsiyada, maxkamadaha, ciidamada, ururada dawladda, ganacsiyada iyo tiro kasta oo ururo kale ah. Qaar ka mid ah dhaqamadan machadyadu waxay horseedaan kala duwanaansho xagga shaqada, waxbarashada, xabsiga, daryeelka caafimaadka iyo wax ka badan.
Cunsuriyada qaab dhismeedka Waxa loola jeedaa habka taariikhda, bulsho, cilmi nafsiga, caadooyinka dhaqanka iyo siyaasadda ay u sii waaraan faa'iidooyinka ku salaysan jinsiyadda. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah farqiga jinsiyadeed ee hantida, helitaanka waxbarashada, rajada nolosha, iyo helitaanka kheyraadka.
Baro wax badan oo ku saabsan caddaaladda jinsiyadda, heerarka cunsuriyadda, iyo fikradaha kale ee sinnaanta jinsiyadeed ee muhiimka ah https://www.raceforward.org/about/what-is-racial-equity-key-concepts.